Etu esi ejikwa faili jikọtara na GNU / Linux? | Site na Linux
Etu esi ejikwa faili jikọtara na GNU / Linux?
Mpikota na Wepụ na GNU / Linux: Foto gosipụtara
Ebuputara akwukwo a ka o buru ihe ntuziaka ma obu ntuziaka maka ihe ihe osise ndi ozo di iche iche na nke ogwugwu maka ijikwa faịlụ ndi aputara aka. na GNU / Linux Operating Systems (OS) na otu esi eji ha arụ ọrụ nke ọma.
Fọdụ n'ime ngwa ndị dị na GNU / Linux, ọkachasị eserese, ewezuga ịbụ n'efu, imeghe na n'efu, bụkwa ọtụtụ nyiwe na ọtụtụ ụdịYa mere, ha na-ejikarị arụ ọrụ na Windows ma ọ bụ MacOS ma dakọtara na ọtụtụ ụdị mkpakọ usoro nke sistemụ arụmọrụ ndị ọzọ.
2.1 Site na njedebe
2.1.1 Zọ nwụnye
2.1.2 Ngwa dị
2.2 Gburugburu Ebe Obibi
2.2.5 Ndị ọzọ nwere onwe ha, mepee ma ọ bụ n'efu maka Windows
Maka onye ọrụ nkịtị na onye ọrụ dị elu, na ọkachasị onye ọkachamara ma ọ bụ ọkachamara kọmputa, Nchịkwa na nchekwa nke ozi bụ ihe dị mkpa ma dị nro nke chọrọ nlebara anya na mkpa. Na mpaghara a, ihe ọmụma na ojiji nke ụzọ kachasị mma ma ọ bụ ngwa maka mkpakọ na decompression nke data akụrụngwa dị mkpa.
Ebe ọ bụ na n'oge ọ bụla, Enwere ike ịchekwa data ọ bụla na akụrụngwa ọ bụla ma ọ bụ akụrụngwa, nchekwa, kesara na ọbụlagodi, site na iji usoro ma ọ bụ ngwa ndị a., ebe ọ bụ na ha na-emeziwanye ma kwado ọrụ ndị a, na-eme ka oge na ohere dị mfe. Na o doro anya ma ọ bụrụ na anyị ejiri ma ọ bụ jiri ọtụtụ ozi ma ọ bụ ozi bara uru, nke a na-abawanye oge iji gbanwee ya na ihe egwu ọ nwere ike imetụta n'ụzọ ọ bụla.
Ọ bụ ya mere, Mkpokọta faịlụ / decompression bụ usoro magburu onwe ya ma ọ bụ usoro iji rụọ ọrụ iji belata oge a, ohere, nchekwa, na nsogbu nzuzo na ijikwa data echekwara ma jiri. N'ihi na mkpakọ na-enye ohere ka faịlị pere mpe, ka ha were obere ohere ma nwee ike ijikwa ya (depụtaghachi / imegharị) karịa ọsọ ọsọ, ma nwekwaa nchebe na nzuzo.
Usoro ọ bụla ma ọ bụ ngwa na-ejikarị algorithms dị iche iche mgbakọ na mwepụ maka mkpakọ / decompression, ụfọdụ ka mma ma ọ bụ rụọ ọrụ nke ọma, dị irè ma ọ bụ dị nchebe karịa ndị ọzọ. Ugbu a enwere ọtụtụ nhọrọ dị iche iche ịhọrọ site na sistemụ arụmọrụ ọ bụla, yana ọbụlagodi na ọtụtụ, yabụ, ha bụ ọtụtụ nyiwe. Na agbanyeghi otutu uzo di, enwere otutu uzo ma obu uzo di iche iche, dika: Tar, Zip, na Rar.
A na-eji usoro mkpakọ iji belata ohere nke data niile, dịka akwụkwọ ma ọ bụ folda jupụtara na ha nwere otu ma ọ bụ karịa ụdị ụdị n'otu oge ahụ, ma ha na-ejikwa ya na ikpe, dịka ọmụmaatụ, vidiyo, ọdịyo na onyogho, iji nweta nbelata nha, na-achụrụkarị ịdị mma ha (mkpebi), wee si otu a chekwaa ohere diski ma kwado nnweta otu ntanetị na ndị ahụ ngwaọrụ ndị na-enweghị ezigbo ma ọ bụ njikọ nke oge a (ọsọ).
N'ikpeazụ, ọ dị mkpa ịmara na algorithms dị ugbu a na nke dị iche iche maka mkpakọ na-eme ka data ghara inwe ohere na diski, ha na-eji usoro abụọ a maara dị ka: Lossless mkpakọ na Lossy mkpakọ. Typesdị mkpakọ abụọ a nwere uru na ọghọm dị iche iche, enwere ike nyochaa na akwụkwọ ndị ọzọ na ịntanetị.
Dị ka anyị kwurula na mbụ usoro okike nke ugbu a maka ijikwa mkpakọ nke faịlụ (faịlụ) na data n'ozuzu nke ndị ọrụ na sistemụ arụmọrụ sara mbara, ọkachasị na GNU / Linux, ya mere anyị ga-ekwupụta ha n’okpuru, kewaa ha ụzọ abụọ: Terminal and Graphical Environment.
Site na njedebe
Site na ọnụ ọ bụla ngwa a na-arụnyere na-adabere na Distro ebe a ga-arụ ya. Ọmụmaatụ:
Arch / nkwekọrịta:
Agbanyeghị na enwere ike ịnwe ọtụtụ, ndị kacha mara amara ma jiri ya, na ọtụtụ n'ime ha arụnyere na ndabara, n'ọtụtụ GNU / Linux Distributions ha bụ:
aj: (ntuziaka / manpage)
bzip2: (ntuziaka / manpage)
gzip: (ntuziaka / manpage)
lasa: (ntuziaka / manpage)
lzip: (ntuziaka / manpage)
lzma: (ntuziaka / manpage)
p7zip: (ntuziaka / manpage)
sharutils: (ntuziaka / manpage)
rar: (ntuziaka / manpage)
ụ: (ntuziaka / manpage)
adighi: (ntuziaka / manpage)
unrar: (ntuziaka / manpage)
enweghị ego: (ntuziaka / manpage)
tọpụ: (ntuziaka / manpage)
xz-arịa: (ntuziaka / manpage)
zip: (ntuziaka / manpage)
zoo: (ntuziaka / manpage)
Can nwere ike ịpị aha nke ngwa ndị a kpọtụrụ aha n'elu iji nweta "Official DEBIAN Package Library" iji mụta maka nhazi ya, nhazi ya na nnweta ya., ma ọ bụ na-esote onye nke ọ bụla iji nweta "Official DEBIAN Manual (Manpages)" nke otu, iji mee ka ojiji ya dịkwuo omimi, ọkachasị gbasara njikọta nke iwu iwu nwere ike gbue.
Njikwa ihe nkiri
B1 Free Akaụntụ
Ndị ọzọ nwere onwe ha, mepee ma ọ bụ n'efu maka Windows
Ka i si hụ, ngwa dị na GNU / Linux dị ọtụtụ, ma ọ bụ maka Terminal naanị, nke ndị ọrụ aka ma ọ bụ ndị ọrụ aka na-ejikarị eme ihe, ma ọ bụ maka gburugburu eserese, nke ndị ọrụ isi ma ọ bụ onye ọ bụla na-ejikarị eme ihe dị mfe. Kasị ike na-arụ ọrụ na ọtụtụ formats, na ndị ọzọ dị na ọtụtụ OS n'otu oge.
Mana agbanyeghị ụdị ndị dị iche iche, yana ọtụtụ ojiji ha, ọrụ na ike ha, Anyị nwere olile anya na akwụkwọ a ga-emejupụta ebumnobi ya nke ime ka ị mara maka ịdị adị ha. ma nye gị ohere iji ohere nke ọ bụla nwere. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịjụ blọgụ ndị ọzọ metụtara ya anyị na-akwado ndị a 2: Esi mpikota onu na decompress faịlụ na Linux y Na ọnụ ya: Mpikota onu ma decompress faịlụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » Etu esi ejikwa faili jikọtara na GNU / Linux?
Abalị Vampire dijo
Ezi ederede, ọ ga-amasị m ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume ka ị gụọ otu esi etinye Peazip na Linux wee gosi otu esi aga ijikọ ya na ndị njikwa faịlụ dị ka Nautilus / Files na Gnome na Dolphin na KDE.
Zaghachi Vampire Night
Ok, daalụ maka ntụnye ahụ.
NetworkManager 1.16 dị ugbu a na ọtụtụ atụmatụ ọhụrụ
GauGAN: NVIDIA AI na-atụgharị eserese n'ime ala photorealistic